Na ụfọdụ netiquette ke kwuru na Apg29
Christer Åberg dị ka ihe Emoji.
Ịrịba dị ka ọ nwere ike ụda, e nwere a ole na ole (Note: a ole na ole) onye mgbe niile na-ahụ onwe ke mbiet kwụ n'ahịrị na mgbe o yiri ka mgbanwe.
Na ụfọdụ netiquette ke kwuru na Apg29.
1️⃣ Mgbe ụfọdụ mma ndị mmadụ na-loggerheads ke kwuru. My ndụmọdụ bụ ka na-amalite na-ekwu banyere ma na-aga megide onye ọ bụla ọzọ. Ị dee gị chere, mgbe ahụ, ọ dị mma.
Ha na-emeso onye ọ bụla ọzọ n'ụzọ ị chọrọ ka o si mesoo, ma ọ bụ adịghị eji na-dee ihe ọ bụla.
2️⃣ Do ihe na-ekwesịghị ekwesị na ihe, i nwere ike ịkọrọ m. Comments ajụjụ deletade comments mgbe niile ụgwọ site na-elu deletade. Apg29 mgbe akọwa ihe mere a comment bụ deletad. Nke a kwesịrị-onwe-nghọta.
3️⃣ Ọ bụrụ na ị chọrọ na-akatọ Apg29 ma ọ bụ tụlee ihe banyere m (Christer Åberg), ị pụrụ ime ya n'ebe ọ bụla ọzọ, ma ọ bụghị ebe a.
4️⃣ Ọ bụrụ na ị a jụrụ na imeru ihe n'ókè kwụ n'ahịrị na ga n'anya na-abịa azụ na na comment, mgbe ahụ, ọ bụ naanị n'ihi na ị na-ezi Netiquette 🙂.
5️⃣ yiri na-ezighị ezi ozizi N'ezie agaghị ekwe. Nkọwa ndị na-eme nke a bụ deletade na ekwele nkwa na imeru ihe n'ókè kwụ n'ahịrị.
6️⃣ nkọwa ndị dị nnọọ aga megide ihe e dere isiokwu pụrụ ime ka ọ bụla ọzọ, ma ọ bụghị ebe a.
7️⃣ N'ezie, ọ dịghị illegalities ekewet.
❗️ Ịrịba dị ka ọ nwere ike ụda, e nwere a ole na ole (Note: a ole na ole) onye mgbe niile na-ahụ onwe ke mbiet kwụ n'ahịrị na mgbe o yiri ka mgbanwe.
❤️ Ma ekele unu niile ndị na-akpa ezi àgwà na-ede n'ezie ezi kwuru na a na-ahụ n'anya ụda na nzọpụta n'ihi na anya! I kere a dị mma nke ukwuu ihu igwe na Apg29 na-agbasa a magburu onwe-esi ísì ụtọ!
✔️ Ndị a iwu N'ezie bönesidan kwa. Ma na-maara na e nwere a bönesida na ọ dịghị okwu page ma ọ bụ "Printer page". Ihe ọ bụla na-adịghị na-ekpe ekpere ma ọ bụ tacksägelseämnen deletas.
✔️ bụghị tụọ ndị mmadụ site na-akpọ ha aha, na a na-emetụta gị ide.
✔️ Klagoböner, mmegwara ekpere na hatböner bụ doro anya na ọ bụghị welcome.
✔️ Biko nwere nzọpụta gị n'anya mgbe ị na-eziga na bönämnen.
Ọ bụrụ na i nwere ihe na-ekwu banyere na nyekwara na ụkpụrụ ndị Kraịst ya biko dee anyị ihe e-mail na-agụ! The email kwesịrị dịkarịa ala 300 okwu ma ọkacha mma 500 ma ọ bụ karịa. -Agba akaebe banyere Jizọs, nzọpụta, baptism, baptism na Mmụọ Nsọ, zara ekpere na-eje ije na Jesus. Ọ dị mkpa na a anyị na-ebi!
I nwere ike e-mail na na Apg29 ma ọ bụ bipụta agụ e-mail na a ụdị .
Cheta na-agụ ozi ịntanetị na kwuru nwere echiche nke onwe ha. Ọ bụrụ na e dere bụ nke m na-anọghị, ị nwere ike-ata ụta m maka ya! "Obi amamikpe mkpakọrịta" ( mkpakọrịta nke ụgwọ ) na-adịghị gụnyere ebe a!
A na-emetụta isiokwu na vidiyo na-adịghị mere site m, ma ọ bụ ma ọ bụrụ na m ajụjụ ọnụ onye na m studio na m na-adịghị na otu echiche ahụ na.
Ma, olee otú obi ụtọ na m na gị na ọtụtụ ndị ọzọ gaa na m blog saịtị Apg29 na anya m dị iche iche na-ebi ndụ na-agbasa ozi!
Na-eso ha obi ụtọ na ọtụtụ ndị ọzọ na ọ bụ esiri ekwe omume!
Chineke na-agọzi gị nke ukwuu na ya n'ezie mma!
Vecka 23, söndag 13 juni 2021 kl. 20:17